Fanatsarana ny tontolon’ny fonja : Nahazo famatsiam-bola mitentina 5 tapitrisa Euros
Published Date: 5 octobre 2021
Miroso ny ezaka fanatsarana ny tontolon’ny fonja eto Madagasikara ary mahavelombolo ny ezaka. Tontosa androany Talata 05 Oktobra 2021 tao amin’ny toeram-pamonjana ireo tsy ampy taona, etsy amin’ny fonjan’Antanimora ny fanaovan-tsonia fifanarahana telo sosona, hamatsiam-bola ny fandaharan’asa fanohanana ny sehatry ny fonja (PASP), nantsoina hoe « Fanarenana ». Mandritra ny 4 taona no hanatontosana ny fandaharan’asa, ary mitentina 5 tapitrisa Euros (23 lavitrisa Ariary) ny vola azo avy amin’ny firenena Frantsay, amin’ny alalan’ny « Agence Française de Développement » (AFD).
Tanjona ny fanatsarana ny fiainan’ireo voafonja sy ny fanomanana ny fiverenan’izy ireo eny anivon’ny fiaraha-monina, ary ny fanatsarana ny fepetra hiasan’ireo mpandraharahan’ny fonja. Tafiditra ao ohatra ny fanatsarana ny sakafon’ireo voafonja, ny fahasalamany, ny fanofanana sy fanabeazana azy ireo, ny famelomana ireo « camps pénaux » hanaovana fambolena. Marihina fa ireo voafonja rehetra manerana an’i Madagasikara no hisitraka an’ity fandaharan’asa « Fanarenana » ity.
Nanao sonia ny fifanarahana, ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, ny mpisolo tena ny « Douleurs Sans Frontières » (DSF) Atoa Garcia FREDERIC, ny mpisolo tena ny « Emmaüs Mundolsheim » Atoa Rodolphe ZIMMERMANN ary ny mpisolo tena ny « Groupes de Recherches et d’Etudes Technologiques » (GRET) Rtoa Claire KABORE. Nanome voninahitra ny fotoana ny Tale lefitra an’ny AFD, Rtoa Valérie ALEXIS, Atoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ary Rtoa Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’asa.
← Fanafainganana ny asam-pitsarana : Nidina ifotony tany Toamasina ny DGJ
Fanapariahana lalàna : Midina ifotony any Ambohidratrimo ny DERL →